बच्चालाई कुन-कुन खोप लगाउनु पर्दछ ? (भिडियोसहित हेर्नुहोस) – NamoBuddha Khabar
बच्चालाई कुन-कुन खोप लगाउनु पर्दछ ? (भिडियोसहित हेर्नुहोस)
बिहिबार, जेठ ०१, २०७७ | ७:४४:५७ |
विश्वमा बृहत खोप कार्यक्रमको सुरुवात सन् १९७४ मा खोप कार्यक्रमबाट सबै देशको बालबालिकाहरुको जीवन सुनिश्चित हुन्छ भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सत्ताइसौ महासभाबाट पारित भएको हो । यो खोप कार्यक्रममार्फत विश्वमा विफर निवारण गर्न सफल घटनाले भएको हो । नेपालमा विफर रोगको निवारण वि.सं.२०३४ सालमा भएको थियो ।
सुरुमा ६ वटा रोगहरु क्षयरोग, भ्यागुते रोग, धनुष्टंकार, लहरेखोकी, दादुरा र पक्षघात (पोलियो) बाट बच्नका लागि खोप कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो ।
हामीले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई समयमा नै सबै खोपहरु लगाउनु पर्दछ । नेपालमा अहिले ११ प्रकारका खोपहरु उपलब्ध रहेको छ । आज हामी तिनै ११ प्रकारका खोपहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको लक्ष्यहरु के के हुन् त ?
बाल तथा मातृमृत्युदरमा कमी ल्याउने, औषत आयुमा वृद्धि गर्ने, रोगहरु उन्मुलन गर्ने जस्तै नेपाल सरकारले सन् २०२३ सम्ममा पोलियो रोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरि, रोगहरु निवारण गर्ने जस्तै मातृ तथा नवशिशु धनुष्टंकरको निवारण (सन् २००५ देखि), दादुरा रुवेला निवारण (सन्२०२३मा ) गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत रुवेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस ( जे.ई), हेपाटाइटिस बी, क्षयरोग (टि.बी) आदि हुन्। साथै पूर्ण खोप युक्त देश घोषण गर्ने लक्ष्यहरु रहेको छ ।
अब हामी नेपालमा खोपहरुको विस्तारको बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।
सुरुमा सन्२००२ मा हेपाटाइटिस बी खोपको सुरुवात भएको थियो त्यसपछि सन् २००४मा डिपिटि र हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा बी को सुरुवात भयो । सन् २००८ मा जापनिज इन्सेफ्लाइटिस खोप जोखिमपूर्ण ३१ वटा जिल्लाहरुमा भएको थियो । सन् २००९ मा हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा बी, डिपिटि, हेपाटाइटिस बी (पेन्टाभ्यालेन्ट¬) खोपको सुरुवात भएको थियो । सन् २०१३ मा दादुरा र रुबेला खोपको सुरुवात भयो पहिला दादुराको मात्र खोप दिइन्थ्यो । सन् २०१४ मा पोलियोको विरुद्धमा आईपिभि खोपको सुरुवात भयो । सन् २०१५ मा दादुरा रुबेला खोपको दोस्रो मात्राको सुरुवात भयो । सन् २०१६ मा जापनिज इन्सेफ्लाइटिस खोप सबै जिल्लाहरुमा विस्तार ग¥र्यो पहिला जोखिमपूर्ण ३१ वटा जिल्लाहरुमा मात्र दिइएको थियो । सन् २०१६⁄०१७ मा एच्.पि.भी खोप कास्की र चितवन जिल्लामा दिइएको थियो । सन् २०१८ मा एच्.आई.पि.भी खोपको सुरुवात भयो अहिले आई.पि.भि खोपमा प्रतिस्थापन भएको छ। सन् २०२० देखि बृहत बहुवर्षिय खोप योजना अन्तर्गत रोटा भाइरस खोप अभियान रहेको छ ।
अव हामी राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको खोपहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौ । राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार हामीले आफ्नो बालबालिकालाई जन्मेदखि १५ महिना सम्ममा ७ पटकमा ११ वटा खोपहरु लगाउछौ। सबै भन्दा पहिला जन्मिनेबित्तिकै वा जन्मेदेखि ४५ दिनभित्रमा
पहिलो खोपको रुपमा बिसिजी ( ब्यासिलस कालमेट ग्युरिन) खोप लगाउछौ । यो क्षयरोगबाट बच्नका लागि लगाउछौ. । यो एकपटक लगाए पछि पुग्छ ।
दोस्रो पटकमा शिशु जन्मेको ६ हप्ता भएपछि पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन लगाउछौ जस अन्तर्गत पोलियो थोपा, एफ.आई.पि.भि, पिसिभी, डिपिटि, हेपटाइटिस बी, हेमोफिलास् इन्फ्लूएन्जा बी र रोटा भ्याक्सिन् हो ।
तेस्रो पटकमा बच्चा १० हप्ता भएपछि खोप लगाउनको लागि खोपकेन्द्रमा लैजानु पर्दछ । तेस्रो पटक लैजादा पोलियो, पिसिभी, डिपिटि, हेपटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा बी र रोटा भ्याक्सिन लगाउनु पर्दछ ।
चौथो पटक खोप लगाउन बच्चा १४ हप्ता पूरा भएपछि लैजादा बच्चालाई पोलियो, डिपिटि,हेपटाइटिस् बी, हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा बी को अन्तिम डोज लगाउनु पर्दछ ।
बच्चालाई पाँचौ पटकको खोप लगाउन बच्चा ९ महिना पूरा भएपछि लैजादा पिसिभीको अन्तिम खोप र दादुरा रुबेलाको पहिलो खोप लगाउनु पर्दछ ।
बच्चालाई छैटौ पटकको खोप लगाउन बच्चा १२ महिना वा १ वर्ष पूरा भएपछि लैजादा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जे.ई) लगाउनु पर्दछ ।
बच्चालाई अन्तिम पटकको खोप लगाउन १५ महिना पूरा भएपछि लैजादा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ । प्रत्येक पटक बच्चालाई खोप लगाउन लैजादा आमाले आफ्नो बच्चाको खोपकार्ड सुरक्षित राख्नुका साथै, खोप लगाइसकेपछि चिन्ह लगाएको छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्दछ ।र एक चोटि खोपकेन्द्रमा गएपछि दोस्रो पटक कहिले आउने, भनेर स्प्रष्ट भएरमात्र फर्किनु पर्दछ ।
पोलियो, डिपिटि, हेपटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लूइन्जा बी खोप ३ पटक दिनुपर्दछ । जुन् ६ हप्ता,१०हप्ता र १४ हप्तामा दिनु पर्दछ । एफ्.आई. पि.भी को २ डोजमध्ये पहिलो डोज ६ हप्तामा अन्तिम डोज १४ हप्तामा दिइन्छ । पिसिभी को ३ डोजमध्ये पहिलो डोज ६ हप्तामा दोस्रो १० हप्तामा र अन्तिम ९ महिनामा दिइन्छ । रोटा भ्याक्सिनको २ डोजमध्ये पहिलो ६ हप्तामा र अन्तिम १० हप्तामा दिइन्छ ।
अब हामी ति खोपहरु र सम्बन्धीत रोगको बारेमा चर्चा गरौ ।
बिसिजी ( ब्यासिलस कालमेट ग्युरिन) यो क्षयरोग अर्थात टिबी रोगबाट बच्नका लागि दिइन्छ ।यो दायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छालाभित्र दिईन्छ । यसलाइ सफल खोप कार्यक्रमको रुपमा लिइन्छ ।
रोटा भ्याक्सिन बालबालिकाहरुलाई रोटा भाइरसबाट हुने झाडापखालाबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो खोप मुखबाट गालाको भित्रि भागमा दिइन्छ । रोटा भाइरसले शरीरको पेट र आन्द्रामा संक्रमण गर्दछ । जसका कारणले झाडापखाला लगायत बान्ता हुने, ज्वरो आउने, पेट दुख्ने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्दछ ।
पोलियो यो खोप पक्षघात भन्ने रोगबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो मुखबाट खुवाइन्छ ।
एफ्.आई.पि.भी (फ्रक्सनल इन्एक्टिभेडेड पोलियो भाइस) यो एक निर्जिव भ्याक्सिन हो । यो दायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छालामुनि दिइन्छ । यो पनि पोलियो वा पक्षघात रोगबाट बच्नका लागि दिइन्छ ।
पिसिभी (न्यूमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन ) यो खोप निमोनियाजन्य रोगहरुबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो खोप दायाँ तिघ्राको बिच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ । यो बच्चाहरुको साथै यो खोप रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरु, अंग प्रत्यारोपण गरेका मानिस जो न्यूमोकोकल रोगको जटिलता हुने स्वास्थ्य स्थिति भएका मानिसहरुलाई पनि दिइन्छ ।
डिपिटि ( डिप्थेरिया, पुर्ट्युसिस, टिटानस¬) यो तिनवटा रोगहरु भ्यागुते रोग, लहरेखोकी र धनुष्टंकरबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो बायाँ तिघ्राको बिच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ । भ्यागुते रोगका कारणले श्वासप्रश्वास, प्यारालाइसिस, मुटुको समस्या जस्ता हुने गर्दछ। धनुष्टांकार रोगका कारण बिरामीको शरीर धनुजस्तो पछाडि तान्ने, जस्ले गर्दा श्वास फेर्नलाई समस्या हुने,शरीर कडा हुदै जाने, धेरै दुखाई हुने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्दछ । त्यसैगरि लहरेखोकीको कारणले बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या, खाना, निल्नका लागि समस्या जस्ता लक्षणहरु लेदा पर्दछन् ।
हेपटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ए, बी,सी, डी, इ मध्येको सबैभन्दा खतरनाक किसिमको भाइरस हो ।यो भाइरसले शरीरको कलेजोमा संक्रमण गर्दछ । यसबाट बच्नका लागि हेपटाइटिस बी भ्याक्सिन दिइन्छ । यो बायाँ तिघ्राको बिच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा हेपाटाइटिस बी को संक्रमण १ प्रतिशत भन्दा कममा झारेको र त्यसमार्फत हुने दीर्घ संक्रमण र कलेजोको क्यान्सरका कारणलाई न्यूनिकरण गरेकोले यो सफलता हासिल गरेवापत नेपाललाई सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३ मा भारतको नयाँदिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.)ले सम्मानित गरेको थियो ।
हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी खोप हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी बाट हुने विभिन्न संक्रमणबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो पनि बायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ । यो ब्याक्टेरियाले निमोनिया लगायतका श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरु, जोर्नी, हाड, रगत, मुटुको तहहरुमा समेत संक्रमण गर्दछ ।यो ब्याक्टेरियाबाट विशेष गरि ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु बढि प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
दादुरा रुबेला खोप दुई रोगहरु दादुरा र रुबेला रोगबाट बच्नका लागि दिइन्छ । यो भाइरसको कारणबाट लाग्ने रोग हो । यो खोपको पहिलो मात्रा ९ महिना र अन्तिम १५ महिना पूरा भएपछि दिइन्छ । यो खोप बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छाला र मासुको बिच भागमा दिइन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम सन् २००४ मा दादुराको मात्र खोप कार्यक्रम संचालन भएको थियो र सन् २०१३ देखि दादुरा रुबेला दुबैको खोप कार्यक्रम संचालन भएको हो ।सन् २०२३ सम्ममा नेपाल लगायत दशिणपूर्वी एसियाबाट दादुरा रुबेला निवारण गर्ने लक्ष्य अनुसार नेपालमा पनि सन् २०२० मा राष्ट्रिय खोप अभियानको रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
जे.ई अर्थात जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भाइरस फ्लाबिभाइरस जस्तो डेंगु, पहेँलो ज्वरो हुन्छ । यो क्यूलेक्स जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने गर्दछ । जे.ई खोप एकपटक मात्र दिइन्छ । जुन दायाँ तिघ्राको माथिल्लो बाहिरी भाग छाला र मासुको बीचमा दिइन्छ ।यस्तो रोग सर्वप्रथम सन् १८७१ मा जापानमा देखा परेको थियो ।